किन रुन्छ मान्छे ? सानो सानो कुरामा रुने मानिस यस्ता हुन्छ्न हेर्नुहोस ! - ramechhapkhabar.com
किन रुन्छ मान्छे ? सानो सानो कुरामा रुने मानिस यस्ता हुन्छ्न हेर्नुहोस !
पृथ्वीमा जति पनि प्राणीहरुको जन्म भएको हुन्छ तिनीहरु मध्ये मानव मात्र एउटा यस्तो प्राणी हो जसले आफ्ना मनका भावनाहरुलाई विभिन्न तरिकाले खुला रुपमा प्रकट गर्न सक्छ। तर जब मानिस पिडा ब्यक्त गर्दछन तब उनीहरुको प्रकट गर्ने तरिका पनि भिन्न हुन्छ।
१:- भावना बयान गर्ने तरिका
हास्नु , रुनु, दुखि हुनु , खुसि हुनु आदि यी सबै भावनात्मक कुराहरु हुन्। तर जो मानिस सानातिना कुरालाई लिएर बेकारमा रुने गर्छ त्यस्ता मानिसलाई सम्भवत कसैले पनि मन पराउदैनन। यो एकदम प्रयोगात्मक कुरा पनि हो। हामी सबैमा भावना हुन्छ यो एक सामान्य कुरा हो कसैले यसलाई सामान्य तरिकाले डिल गर्ने प्रयत्न गर्छन त कसैले यसलाई बयान गर्न अनेकौं तरिका अपनाउने गर्छन।
२:- मनोवैज्ञानिक दृष्टि
यदि यो कुरालाई मनोबैज्ञानिक दृष्टिले हेर्ने हो भने स -साना कुरामा रुने मानिसलाई अन्य मानिसको तुलनामा फरक मान्ने गरिन्छ। उनीहरुका अनुसार धेरै रुनु स्वास्थ्यका लागि उत्तम मानिन्छ। धेरै रुने मानिसमा बिशेष गुण समेत हुने गर्छ। त्यसैले रुन मन लागेको बेलामा धित मर्ने गरि रुनुहोस , यी समस्याबाट सजिलै फुत्किन सकिन्छ।
सामान्यतया अधिकांश मानिसहरु धेरै तनाव र चिन्ता परेको बेलामा रुने गर्छ। तर मनोबैज्ञानिकहरुले भने तनाव भएको बेलामा रुनाले सम्पूर्ण तनाव र चिन्ताबाट मुक्त भई मानसिक शान्ति मिल्ने बताउछ।
३:- भावना व्यक्त गर्न सक्षम
रुनुको अर्थ यो पनि हो तपाईलाई आफ्नो भावना उजागर गर्न न त लाज लाग्छ न त हिच्किचाहट नै ,एक मनुष्य हुनको नाताले यस कुरालाई पनि सामान्य रुपमा लिइन्छ।
४:- एक मजबुत व्यक्तित्वको पहिचान
यदि जसलाई सानातिना कुराले छुन्छ र रुन थाल्छ यस्तो अवस्थामा यो कुरा सम्झिनु आवश्यक छ कि उक्त मानिस धेरै नै मजबुत छ, आँखाको आँसुलाई लुकाउनु मजबुती होइन आफ्नो भावनालाई व्यक्त गर्नुले व्यक्तिको सहि पहिचान दिलाउछ। तपाई यो कुरालाई मनन गर्नुहोस कि तपाई जस्तो मनोइस यस पृथ्वीको लागि निकै नै महत्वपुर्ण छ।
जब तपाई आफ्नो भावनालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, तब तपाईले आफुले आफुलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्षम हुनुहुनेछ। यसका अलावा मनको भावना खुलस्तसंग प्रस्तुत गर्नाले व्यक्तिगत , सामाजिक र व्यवसायिक जीवनमा यसको लाभ प्राप्त हुन्छ। स्वकार्यता मष्तिस्कको शान्तिसंग जोडिएको हुन्छ। यस्ले मन्मा आन्नद मिल्छ ।
मलेसियामा किन हराउँदै छन् नेपाली युवा-युवती ?
काठमाडौं । मलेशिया नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मध्ये एक हो । रोजगारीकै लागी लाखौँ...
मलेसियामा नक्कली खोप प्रमाणपत्र बिक्री गर्ने आठ जना पक्राउ
मलेसियामा बुस्टर डोज खोप लगाएकालाई क्वारेन्टाइन बस्नु पर्छ कि पर्दैन ?
मलेसियामा कामदार पठाउन अब एजेन्टले नपाउने ?
३ माघ, काठमाडौं । विराट कोहलीले भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीमको कप्तान छोडेका छन्। कोहलीले...
मलेसियाको बारेमा धेरैलाई थाहा न भएको कुरा, कस्तो देश हो मलेसिया ?
बिहारका एक पुरुषद्वारा कोरोना खोपको ११ डोज लिए ?